EZRA 2.1-70 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
EZRA 2.1-70 F. 6
IREO JIOSY NIVERINA NANKANY PALESTINA
Ireo olona niakatra avy tamin’ny fahababoana (1-57). Voatanisa avokoa ny tanàna nihavian’izy ireo tsirairay avy, ny isan’ny lehilahy isan-taranaka, notarihin’ireo mpitarika voalaza anarana tsirairay. Voatanisa ihany koa ny andraikitry ny isan-tokony sy ny isan-taranaka: ny mpisorona, ny levita, ny mpihira, ny mpiandry varavarana. Voalamina sy voasokajy ary voatahiry tsara avokoa. Mba manao ahoana ny fahaizantsika mikajy, mandamina sy mitahiry eo amin’ny asan’ny Tompo ankinina amintsika?
Tsy maintsy fantarina ny loharano nihaviana (58-63) Satria nolovaina ny asa fanompoana teo amin’ny testamenta taloha dia tsy maintsy mitondra ny porofo ny tsirairay ahazoana mamantatra azy. Marika iray mampiavaka ny firenena Isiraely izany ka mahatonga azy ho “firenena masina, voatokana ho an’i Jehovah”; Manao ahoana kosa ny fandaminana ny asa fanompoana amin’ny andro ankehitriny?
Manome araka izay nanambinana azy (64-70). Natao fanisana koa hatramin’ny fananan’ny tsirairay: ny soavaly, ny ampondra, ny rameva sy ny boriky. Ary ny sasany kosa nitondra araka izay nananany avy hanampy ny vola voavory hananganana ny tranon’Andriamanitra.
Saintsainina: “Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga.” (1Petera 2.9)